Xaqiiqooyin Kaa Nixinaya Oo Ku Saabsan Boorasada Madow ee Donald Trump | Xaqiiqonews
Xaqiiqooyin Kaa Nixinaya Oo Ku Saabsan Boorasada Madow ee Donald Trump
Caadada Donald trump, madaxwaynaha maraykanka, ayaa ah meel kasta oo uu tago, waxaa weheliya boorso madow oo rasmi ah oo loo yaqaan ‘boorsada gurmadka ee madaxweynaha’, waxaa sidoo kale loo yaqaanaa boorsada ‘kubada Cagta’ ee nukliyeerka.
Shan askari oo Mareykan ah ayaa si gaar ah loogu tababaray in ay la socdaan ‘ balankan khatarta ah’, haddii ay dhacdo halis caalami ah, Maraykanku wuxuu bilaabi karaa weerarka nukliyeerka daqiiqado gudahood-iyadoo madaxweynaha uu ka ridaayo nukliyeerka boorsadan .
Boorsada Gurmadka heeganka ah waa madow , oo leh gacmo-qabasho wareegsan oo kor kaga dahaaranyahay aluminium adag, oo ku daboolan maqaarka madow, mararka qaar waxaa soo muuqanaya anteeno leh qalab isgaarsiineed, taasi macnaheedu waxa ay tahay boorsadani waxaa loo sameeyey Qaab remote Control ah.
Waxa ay ka kooban tahay waxyaabo aad u qarsoodi ah oo u oggolaanaya madaxweynaha Maraykanka inuu u oggolaado weerarka nukliyeerka haddii ay ka fog tahay xarumaha taliska (qolka shaqada).
Maamulihii hore ee xafiiska Militariga aqalka Cad Bil gulley waxa uu leeyahay boorsadani kama koobna oo kaliya Badhanka gaduudan ee hubka laga rido, sidoo kale waxa ay wadataa ilaa afar buug oo kala ah
-Buugga madow :waxa uu kakooban yahay 75 bog, waxaana lagu qoray qad gaduudan iyo mid madow, waxaana buugga uu bixinayaa macluumaad iyo talooyin ku saabsanb “Duqeyn Nukliyeer Oo Aargudasho ah”.
-Buug kale oo madow: waxaa ku qoran buugani goobo sir ah oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo madaxweynaha marka la gamaayo nukliyeerka.
-Buug yar :oo ka kooban 10 bog, waxaa uuna bixinayaa macluumaad ku saabsan sida loo rido hadii dalka uu galo xaalad heegan ah.
_Kaarka Aqoonsiga: waxaa uu wataa kaarkani “Authentication code” si loo rido hubka.
Naaneysta ah ‘Kubadda Cagta’ ee la siiyey boorsadan ayaa ah “erey baaq” oo qarsoodi u ah dagaalka nukliyeerka ee Mareykanka, sida laga soo xigtay Xoghayihii hore ee Gaashaandhigga Maraykanka Robert McNamara.
Boorsadani had iyo jeer waxay ku jirtaa gacanta Madaxweynaha Maraykanka, meel kasta oo uu joogo, hadii diyaarad uu saaranyahay, hadii helicopter uu fuulo, hadii baabuur uu ku safraayo ama xitaa inta uu ku dhax jiro wiishka.
Marka uu madaxweynaha uu joogo Aqalka Cad, ‘kubadda’ waxaa lagu keydinayaa meel ammaan ah oo ku taal Aqalka Cad.